Nhau - Pachinzvimbo chemufananidzo weChina, Hainan Huayan Biotechnology Co. LTD yapinda muNasdaq muNew York kuzopemberera shanduko.
Pachinzvimbo chemufananidzo weChinese wekambani, Hainan Huayan Biotechnology Co. LTD yapinda muNasdaq muNew York kuzopemberera shanduko.
Musi waZvita 18, 2018, HYB yakakokwa kuti itore chikamu mu "inosimbisa iyo yekuMabvazuva mafungu nekusimudzira nguva nyowani" kupemberera makore makumi mana ekushandurwa uye kuvhura misoro yekusimudzira zviitiko. Xia jie, sachigaro webhodhi revatungamiriri, akakudzwa sechigunwe chikuru chemai nyika muNasdaq, New York, inomiririra indasitiri hombe yehutano kuratidza mufananidzo wemabhizinesi eChinese kupasi rose.
Muna 1978, chechitatu Plenary Session ye11th CPC Central Committee yakaratidza kutanga kwerwendo rweChina rwenhoroondo yekuvandudza nekuvhura. Kubva kumaruwa kusvika kumaguta, kubva kune mutyairi kusvika pakuwedzera, kubva kugadzirisa hupfumi kusvika mukudzamisa zvakadzama shanduko… Mumakumi mana emakore apfuura, vanhu vechiChinese vakanyora nemaoko maviri epic yakaisvonaka yekusimudzira nyika nenyika. Shanduko uye kuvhura, yechipiri shanduko yeChina, haina kungochinja zvakanyanya China chete, asi zvakare yakachinja zvakanyanya kuNyika!
Mumakore makumi mana apfuura, mabhizinesi echiChinese akanyatso kutanga kubuda ndokuenderana nemitemo yenyika dzepasi rose. Huwandu hukuru hwezviratidzo zveChinese vakaona kudyidzana kwenyika kuburikidza nemabasa avo, uye HYB zvishoma nezvishoma yakava inozivikanwa inozivikanwa muindasitiri yenyika.
Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd.i muunganidzwa wekutsvagisa chigadzirwa nekusimudzira, kugadzirwa, kutengesa kwekubatanidzwa kweazvino yepamusorosoro hutano hwebasa bhizinesi, inotungamirwa muhaikou, Hainan. Parizvino, kambani ine anopfuura makumi mana patent dzakasiyana, simbisa bhizinesi mureza unopfuura makumi maviri, angangoita gumi akazara chigadzirwa system, makore gumi nematatu akahwina "yepamusoro gumi yesainzi uye tekinoroji yekuvandudza yeHainan province unit", Hainan province high-tech mapurojekiti, " China hutano manejimendi yakasarudzika yemupiro yunifomu "uye kumwe kukudzwa, kambani iri muna Chikunguru 2017 nebazi rezveMari renyika neHurumende Oceanic Administration se" nyika yakasarudzika sarudzo-uye mhedzisiro mhedzisiro-muMarine hunyanzvi hwekuvandudza chirongwa chekuratidzira ".
Mumakore achangopfuura, Huayan Kambani yaita huwandu hwenyika gumi nematanhatu emunyika, ematunhu uye eruzhinji R & D mapurojekiti. Parizvino, yawana 9 inoenderana nehunyanzvi hwekutsvagisa nhanho kana mhedzisiro, ine chiyero chekushandurwa chakakwira se82% uye avhareji pagore kutendeuka kwehuwandu hwemapurojekiti matatu. Kambani yenyika yekugadzira patent "yakakwira chimiro chihombe chakajeka ganda collagen enzyme mutation system, senge kuvakwa kwekoramu, pichia expression plasmid uye kumanikidza kuongorora uye nzira dzekuchenesa" (patent mvumo nhamba zL201210141391. X) imwe, ita iyo huru kambani zvigadzirwa isinglass mapuroteni pahwaro hweiyo yekutanga patent tekinoroji, uye kushandisa iyo patent tekinoroji ye enzyme - ganda nhunzi collagenase, inogadzira mamwe mamorekuru uremu hwe collagen protein, iine indasitiri imwechete munzvimbo inotungamira mumakwikwi epasi rese.
Kubva kupera kwa2014 China nemakambani ari munzvimbo yepamusorosoro iri muhaikou runako Ann tekinoroji nyowani yekudyara kweguta ingangoita mamirioni zana yuan kuvaka iyo yekutanga protein peptide isinglass yekumisikidza base, inosanganisira 4 pagore kuburitswa kwemazana matani ehove kunama yepakutanga protein peptide yekugadzira mutsara (iyo yakazara kuburitsa matani 4000 / gore), 6 magumo zvigadzirwa zvigadzirwa kugadzirwa, inotsigira yekushambadzira nzvimbo, yekutsvaga uye yekuvandudza nzvimbo (academician workstation), tsvina kurapwa chiteshi, kutonhorera kuchengetedza, vashandi vanogara munzvimbo, nezvimwe zvigadzirwa zvine zvigadzirwa. inosanganisira hove guruu zai peputuru hupfu hwepakutanga, collagen peptide chikafu uye zvigadzirwa zvekuchengetedza hutano, runako uye zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda uye zvigadzirwa zvema biomedical.